Guddoomiyayaasha Labada Xisbi Mucaarid Ee KULMIYE Iyo UCID Oo Si Adag Ula Hadlay Madaxweyne Rayaale,Iyaga oo Ku Tilmaamay Nin Qol Ku Xidhan | Samatar's Weblog
2008-05-13 (samatar) Hargeysa(HWN):- Guddoomiyayaasha Xisbiyada Mucaaridka ah ee Kulmiye iyo Ucid Eng.Faysal Cali Waraabe iyo Axmed Maxamed Maxamuud (Siilaanyo) ayaa jawaab ka bixiyay eedaymu uu shalay u jeediyiyay Madaxweynaha Somaliland Md. Daahir Rayaale Kaahin, islamarkaana waxa ay ku doodeen Guddoomiyayaasha Mucaaridku in uu Madaxweyne Rayaale yahay ninka dhiniciisa ay ka bur-burtay dhex-dhexaadintii uu isu xilqaamay Guddoomiyaha Wakiilladu.
Labada Guddoomiye Mucaarid waxa ay ku sheegeen Mr. Rayaale, inuu yahay nin qol isku xidhay, oo dooonaya inuu si suuq-madaw ah u arko cida uu isagu rabo inuu arko. Iyaga oo sheegay inay soo dhawaynayaan waddo kasta oo xal loogu heli karo khilaafaadka siyaasadeed ee cakiran, ee wakhtigan hadheeyay dalka Somaliland.
Sidaa waxay ku sheegeen Guddoomiyayaashu Waraysiyo ay siiyeen Idaacada BBC-da Laanteeda Af-soomaaliga.
Ugu horeyn Guddoomiyaha Xisbiga Kulmiye Axmed Maxamed Maxamuud (Siilaanyo), oo la waydiiyay sida ay u aqoonsan yihiin jiritaanka iyo sharci-nimada Golaha Guurtida Somaliland, waxaanu ku jawaabay,
“Arrintaas waxaanu ka qabnaa marka u horeysa horta waxaanu u qirsanahay una ogolahay inuu yahay Gole dastuuri ah, wax hadal iyo muran ka taagan yahayna maaha. Taa macneheedu-se maaha wax kasta oo Golaha Guurtidu gooyaan in ay yihiin dastuuri ama shirci. Hawlaha ay ku shuqulka leeyihiin ee u gaarka ah, waxa dastuurku u ogolyahay ayuun baana lagu tilmaami karaa sharci. Laakiin wixii aan dastuurku u ogolayni sharci maaha,m go’aan kasta oo ay iyagu gaadhaana sharci maahA, iyagu se waa Hay’ad Dastuuri ah.” Ayuu yidhi Guddoomiyaha Xisbiga Kulmiye.
Mar sii waydiiyay Guddoomiyaha Kulmiye, su’aal ahayd Waxa ay kaga jawaabayaan, hadal uu Madaxweyne Rayaale ku yidhi ‘ilaa ay soo ogolaadaan labada Xisbi ee Mucaaridku Golaha guurtida iyo wixii ay soo gooyaan inay sharci yihiin la kulmimaayo.’ Waxaanu kaga jawaaay Axmed Maxamed (Siilaanyo), su’aashaa oo uu yidhi, “Taas waxaanu kagaga jawaabaynaa sida aanu nidhi, anagu horena waxaanu u cadaynay imikana diyaar u nahay inaanu Madaxweynaha la kulano, sidaad ogaydeena arrinta dhex-dhexaadinta waxa ku jiray Guddoomiyaha Golaha Wakiillada Somaliland, oo aanu hawshaa la wadnay mar qudha maanaan diidin inaanu la kulano.”
“Arrinta uu ka hadlayo Madaxweynuhu ee uu leeyahay wuu diiday inuu I arko Siilaanyana, waxa ay ahayd oo aad moodaa inuu Madaxweeynuhu jeclaystay inuu suuq madaw igu arko, ayaan-darro ta anigu waan ka cudur-daartay taas ayaanay ahayd. Hawsha xilka Qaranka Madaxweynaha iyo Madaxweyne Ku-xigeenka marka laga yimaado, Guddoomiyaha Golaha Wakiillada ayaa ka mid ah Masuuliyiinta ugu waa wayn ee dalka. Hawsha uu xilkaas u hayay ee lagu wada ogolaa ee Xisbiyada Mucaaridka ahi u midaysnaayeen ee aanu Ergada u diranay hawsha uu noogu maqnaa ixtiraamkeeda iyo qadarinteeda ayuun bay ahayd, meel aan ku diiday iyo qaab aan u diiday midna ma jrin, taasina waa gaf, hadalada noocaas ahina kuwo aanu Madaxweynaha ka filaynayna may ahayn.” Ayuu sii raaciyay jawaabtiisa Guddoomiye Siilaanyo.
Guddoomiyaha Xisbiga Mucaaridka ah ee Kulmiye, mar uu ka jawaabayay su’aal la waydiiyay oo ahayd, in Madaxweeynuhu sheegay in uu Axmed-siilaanyo u diray xubno ka socday Akaadamiyada nabada iyo horumarinta Somaliland, isla markaana uu Siilaanyo diiday, ka dibna uu Madaxweynuhna markiisii diiday,m waxa uu ku jawaabay
“Xubnaha Akaadamiyaddu way ii yimaadeen, waxay igu yidhaahdeen Madaxweynuhu aroorta ayuu ku arkayaa, inagaana is raacayna, waxaan ku idhi Madaxweynaha inaan arko aad iyo aad ayaan u doonayay, idinkuna aad baad u mahad-santihiin Guddoomiyaha Wakiillada ayaa waan-waantan waday isagaananu ka war sugaynaa, markaa waxaan diiday ma jiraan. Waxaan leeyahay Madaxweynuhu haduu leeyahay cid aan arko, oo uu doonayo inuu qof walba suuq madaw ku arko, taasi wax soconaya maaha.” Ayuu yidhi Guddoomiyaha Xisbiga Kulmiye.
Waxaanu intaasi sii raaciyay oo uu yidhi, “Wax waliba jid loo maro ayay leeyihiin, jidka saxda ah ayaa la marayay, waxaanan leeyahay waxa qalad ku joogay isaga (Madaxweynaha). Waxaanu doonaynaynay inaanu u aragno Madaxweynaha waa danta iyo maslaxada ummada, waa dantiisa iyo dantayada. Arrintanina arrin fudud may ahayn. Marrkaa waxa uu sheegayaa wax cudur-daar laga dhigan karo maaha, ee waa mar-marsiiyo sida u dhigan.”
Axmed Maxamed Maxamuud (Siilaanyo), waxa uu sheegay in uu Guddoomiyaha Golaha Wakiilladu Md. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi (Cirro), uu door wax ku ool ah ka qaatay dhex-dhexaadintii uu galay, isaga oo xusay in guulihiisa ay ka mid ahaayeen isu keenidii Guddoomiyaha UCID iyo Madaxweyne Rayaale.
Hase ahaatee, mar la sii waydiiyay mawqifkooda wakhtigan waxa uu yidhi Siilaanyo,
“Anagu mar walba waxaanu taaganahay in la sameeyo wixii dalka, dadka iyo nabadgalyada aayahoodu ku jiro, dalka xaaladiisu meel aad u adag ayay maraysaa, nin kaligii damcay inuu ku macan-gago, oo uu kaligii tiisa iska muquunsadaa wax caqliga gala maaha. Waaananu soo dhawaynaynaa diyaarna waanu u nahay cid kasta oo dhex-dhexaadin ka gasha waxa dadka, dalka iyo nabadgalyada dan u ah.”
Sidoo kale Guddoomiyaha Xisbiga Mucaaridka ah ee UCID Faysal Cali Waraabe, oo isagana B.B.C-du way diisay aragtidiisa ku wajahan is maan-dhaafka xiligan taagan, waxaanu ku jawaabay,
“Horta, murankan imika taagani maaha mid ah qalalaase siyaasadeed sida ay BBC-du u sheegtay, ee waxa weeyaan muran muddo kordhinta (Guurtidu u samaysay Madaxweyne Rayaale) ku aadan, loomana baahnayn. Haduuse (Madaxweynuhu) noola iman lahaa Madax-nimo iyo wada-hadal uu mar hore xalin lahaa.” sidaa ayuu yidhi Guddoomiyaha Xisbiga UCID.
Waxaanu sheegay in ay Mucaarid ahaan aqoonsan yihiin Golaha Guurtida, “Golaha Guurtida Anaga dastuurka ayay noogu jirtaa oo waa sharci, oo waa Gole xeer-dejineed, in kasta oo ay calaamatu su’aal taagan tahay markan dambe ee ay isku cusboonaysiiyeen (muddada xilka). Laakiin kama hadhno oo waanaga la shaqayna, ee ay Wakiilladu la shaqeeyaan.” Ayuu yidhi Faysal Cali Waraabe.
Isaga oo hadalkiisa sii watana waxa uu intaa ku daray oo uu yidhi, “Arrinta muranku ka taagan yahay waxa weeye muddo kordhinta ay Guurtidu kordhiyeen bishii hore 10-keedii, iyada oo 9-keedii saddexda Xisbi iyo komishanku ku heshiiyeen goortay doorashada iyo diwaan-gelintu dhacayaan, iyada oo komishanku xaq u leeyihiin taas, ayuu Madaxweynuhu si ula kac ah oo uu murankaa u sameeyo, u yidhi sannad ii kordhiye, xadaa hadii taa nagala tashan lahaayeen oo ay odhan lahaayeen way idinku yartahay wakhtigan Komishanku qabtaye ka dhigta 12-kaa bilood way wanaagsanaanlahayd.”
Waxaanu sheegay Faysal inuu Madaxweyne Rayaale, dhana ka diray Xisbiyada iyo Komishanka doorashooyinka, si ay isula soo qaataan heshiiska qabashada doorashooyinka, dhanka kalana uu ka waydaariyay Guurtida oo uu yidhi wakhtiga kordhiya.
Faysal Cali Waraabe, waxa la waydiiyay, maadaama ay aqoonsanyihiin Golaha Guurtida, waxa ay go’aamadooda ugu aqoonsan waayeen kuwo sharci ah, waxaana uu ku jawaabay Faysal, oo uu yidhi, “Meeshan lagama hadlayn muddo kordhin ee doorasho ayaa laga hadlayay, doorashada mudaynteedana waxa xaq u leh oo uu qodobka 83-aad ee Dastuurku siinayaa Komishanka, iyada oo sharciyoobaysa marka saddexda Xisbi isku raacaan, laakiin tan Guurtida ee uu Madaxwaynuhu qabsano xiliyadaa komidhan ma jirin, diiwaangelini ma jirin anagaana u ogolaan jiray wakhtigaas, laakiin imika waxaanu nidhi waar waqtigaa Xisbigaagu nala saxeexday naga talagaliya, haday guurtidu sidaa tidhina aan ka wada-tashano, markaa waxa weeye Madaxweynuhu wada-tashiga ayuu diidayaa.”
Mar uu ka hadlayay Guddoomiyaha Ucid, Guddoomiyaha Golaha Wakiillada iyo qaabkii dhex-dhexaadinta, waxa uu yidhi, “Madaxweynuhu shan Wasiir ayuu soo diray, Guddoomiyaha Golaha Wakiilladuna si fiican ayuu ula shaqeeyay, anaguna si fiican ayaanu u la shaqaynay. Shantii Wasiir markay yidhaahdeen waar (Madaxweyne) haduu Guddoomiyuhu keenay sideed qodob oo qodobka u horeeyaa yahay Gole Dastuuri ah, ee aanu anagu ogolaanay ayaa waxa uu ku soo daray waxa ay gooyaana waa sharci, taana micneheedu maaha Gole kasta oo dastuuri ahi waxa uu soo saaraaba sharcic yahay, qodobka ay u qabsadeen muddo kordhintana waa mid aan dastuurka waafaqsanayn wakhtigan.”
waxaanu ku dooday Guddoomiyaha Xisbiga UCID, in ay sharci noqon karaan waxa ay ku heshiiyaan dhinacyada siyaasada iskaga soo horjeedaa, “Dalka balaayo kama ma jirto ee nabad ayaa ka jirta, wixii aanu ku heshiino ayaa sharci noqon kara. Madaxweynuhuna shantii Wasiir markii ay yidhaahdeen wuu hagaagsan yahay Guddoomiyuhu, shantii Wasiir-ba wuu bedalay.” Sidaa ayuu yidhi Guddoomiyaha Xisbiga UCID.
Faysal Cali Waraabe, mar la sii waydiiyay kol hadii wada-hadalkii bur-buray, muddadii Madaxweynuhuna ku egtahay maalinta khamiista ah 15-ka bishan May, talaabada ay qaadayaan Mucaarid ahaan iyo waxay xal u arkaan waxa uu ku jawaabay, “Horta waa mide Madaxweynaha waxaan u sheegayaa…. Anigu waan u tagay ee aan mawqifkaygii u sheegayna, waxa uu damcay inuu Kulmiye ii waydaarto, oo uu yidhaahdo Siilaanyo wuu jilicsan yahay oo wuxuu ogol yahay ilaa bisha lixdeeda, ee Faysal ayaa ka kullul, waxaananu ku nidhi waar noo kaalay aan wada-hadalee, ilaa hadana waxaan shacbiga reer Somaliland u sheegayaa inaanu taaganahay inaanu wada arrinsano, oo ka wada-tashano waxa la isku hayo.”
“Waan in la wada-tashado, laakiin Madaxweyneheenu wuxuu na leeyahay, Salaadiinta la hadli maayo, Culimo-awdiinka la hadli maayo, Axsaabta la hadli maayo, ee meel baan isku qufulayaa, sidaan doonaanan samaynayaa ayuu taagan yahay.” Ayuu sii raaciyay Guddoomiyaha Ucid hadalkiisa.
Sidoo kale Guddoomiyaha mar la sii waydiiyay su’aal ahayd sida uu u arko aragtida Madaxweyne Rayaale, ee ah ha ogolaadaan mucaaridku sannadka la ii kordhiyay, ka dibna aan wada hadalo, waxa uu yidhi,
“Madaxweynuhu isaga oo nala fadhiya intaa muu na yidhaahdo, oo intaanu isku nimaadno ka doodno, oo uu na qanciyo, oo aanu qancino, oo anaga oo aanu ku heshiino inaanu meel dhexe isugu nimaadno. Madaxweynuhu wuxuu doonayaa in wax kasta looga hadho. Madaxweynuhu wuxuu yidhi sharci baan ilaalinayaa, waxaan ku idhi habeenkii dhawayd ee aanu kulanay ‘hadaad sharci ilaalinaysid xagay kagaga jirtaa sharcigeena in Guurtidu waqti isu kordhiso, xagay kaga jirtaa inay Guurtidu dawladaha hoose waqtiga u kordhiyeen. Markaa Madaxweynuhu wixii uu isagu jecelyahay ayuu sharci u yaqaanaa.”
“Waxaan u sheegayaa madaxweynaha, hadii shacbiga sharaftiisa aad lumisid, sharaftaadu way baaba’aysaa, hadii aanay labada Xisbi Mucaarid ku ogolayn inaad 15-ka May waxa ka dambeeye Madaxweyne noqotid, Madaxweyne ma tihid. Laakiin si aanay taasi u iman aynu isu nimaadno oo aynu wada-tashano ayaan leeyahay. Waana inuu Madaxweynuhu khamiistan nala fadhiistaa, oo aanu ka wada-tashano, kana wada-hadalo arrimaha taagan, markaa hadaanu khaldanahay cid kasta ayaa anaga na qaban karta.” Sidaa ayuu yidhi Guddoomiyaha Xisbiga Mucaaridka ah ee Ucid Faysal Cali Waraabe.